धुलो, धुवाँले श्वासप्रश्वासको समस्यासंगै हृदयघात अर्थात् ‘हर्ट एट्याक’ बढ्याे – Sadarline
डा. अर्जुन कार्की, ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, धापासी काठमाण्डौं
अहिले धेरै मान्छेमा सम्भावना बढेर गएको डा. कार्कीको भनाइ छ ।
सदरलाइनडटकम ७ चैत, नेपालगन्ज : बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर ८ लाई बुधवार पूर्ण खोप सुनिश्चित वडा घोषणा गरिएको छ । खजुरा गाउँपालिकालाई यही महिनाभित्र पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गर्ने तयारी स्वरुप वडास्तरमा तिब्र तयारी भइरहेको हो । बुधवार रनियारपुरमा आयोजित बिशेष कार्यक्रमका बीच जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका सदस्य जुल्फिकर […]